Telegram channel "Lalisa Official channel ✪" — @Lalisa_T_Ayana — TGStat
Lalisa Official channel ✪
Eenyummaan kee kan madaalamu tilmaama namoonni siif kennaniin miti.
➢ Eenyummaan kee si keessa qofadha.
Thoughts from the Product Manager / CEO / Founder of @Qaroocompany
🔵Facebook add ➡️ bit.ly/32A48B8
Website ➡️ bit.ly/3G1PYGB
Dargaggeessa tokkotu ture. Fuudhee akkuma waliin jireenya eegalaniin,
jireenyi baay'ee itti ulfaate. Kanaaf...
Dargaggeessa tokkotu ture. Fuudhee akkuma waliin jireenya eegalaniin, jireenyi baay'ee itti ulfaate. Kanaaf...
Dargaggeessa tokkotu ture. Fuudhee akkuma waliin jireenya eegalaniin, jireenyi baay'ee itti ulfaate. Kanaaf sababni, duwwummaa golasaanii tu...
460 0 1 2
13 May, 00:20
WAAN HIN QABNE FUDHATTA!
~Dubbii #Ajaa'ibaa seenaa #Neelsan
Niilsen Maandellaan yuunivarsiitiitti yeroo seera barachaa ture barsiisaan isaa adiin kan piiter jedhamu qaba ture. Piroofeeserri kun namoota gurraachaaf jibba guddaa qabu turan. Gaaf tokko osoo piroofeesar piiter mana nyaataa jiranii akka tasaa Mandeellaan nyaata isaa qabatee bira taa'e.Piroofeesarichi aariidhaan,"Mandeellaa! Booyyee fi gugeen wajjin nyaachuu hin danda'an!" Jechuun dheekkaman. Innis rakkoo hin qabu piroofeesar! Barriseen deema" jechuun ka'ee teessuma biroo irra taa'ee nyaata isaa nyaate.Ani booyyee osoo hin taane gugeedha jechuu isaa ture. Gama biraan booyyeen si'i jechuu isaati.
Guyyaa biraa piroofeeserichi akka itti haaloo isaa raawwatu yaadee kutaa keessatti Mandeellaa gaaffii gaafatan. "Mandeellaa ! Osoo karaa deemtuu borsaa lama argita. Tokko keessa maallaqa,isa biraa keessammoo ogummaatu jira. Lachuu keessaa isa kam fudhatta?" Jedhee gaafate.
Mandeellaan xiqqoo yaadee,"Borsaa maallaqa qabu sanan fudhakaa!" Jedhee deebisaaf.
Piroofeeserichi deebiin Mandeellaa dogoggoradha jedhee waan yaadeef gammadee,"Argitee Mandeellaa! Ati maal filachuu akka qabdu hin beektu! Ogummaan maallaqa caala!" Otoo ana ta'ee ogummaan fudhadha" jedha. Mandeellaanis deebisee fi sirriidha Piroofeesar! Namni kamuu waanuma hin qabne fudhata. Waan qabu tokko fudhatee maal godhata?"
Dhuma irratti baay'ee itti aare.Guyyaa tokko waraqaa qormaata Mandeellaa irratti, "Dadhabaa! (stupid)" jedhee barreessee kenneef. Mandeellaanis atattamaaan gara isaa deemee, "Dhiifama Piroofeesar! Waraqaa koo irra #Maqaa kee malee qabxiin koo hin jiru!" Jedhe.
Maddi ( source) :- Wantan dubbiserraati!
#share gochuu hin dagatinaa Galatoomaa ❤
⭐Follow my social media account ⬇️
Facebook page ➡️ www.facebook.com/lalifb/
Telegram channel ➡️ T.me/Lalisa_T_Ayana
1.3k 1 14 4 6
YAADOLEE DADAMMAQIINSAA 12:-
➊. Albert Einstein - "Namni dogoggora tokkollee hin raawwanne nama waan haaraa hin hojjenne dha."
➋. Steve Jobs - "Yeroon kee daanga'aa dha, kanaafuu itti jiraachuu nama kan biraa hin balleessin."
➌. Bill Gates - "Guyyaa milkaa'inaa kabajuun gaaridha. Garuu, fuulleffannoo cimaa guyyoota kufaatii irratti kennuun barbaachisaa dha."
➍. Warren Buffet - "Amanamummaan kennaa baay'ee mi'aa dha. Namoota rakasaa irraa immoo hin eegin."
➎. Bruce Lee - "Yeroo hundumaa dogoggorri dhiifama qabaata, yoo walhubachuun jiraate."
➏. Albert Hubbard - "Waarshaan tokko hojii nama 50 hojjechuu danda'a. Waarshaan kamiyyuu yaada nama tokkoo illee hojjechuu hin danda'u."
➐. Robert Kiosks - "Kufaatiin warra sodaatan naasisa, moo'attoota immoo ni jabeessa."
➑. Abraham Lincoln - "Karaan hunda caalaatti fuuldura kee ittiin tolchitu, fuulleffachuu fi ijaaruu dhaan."
➒. Audrey Hepburn - "Wanti kamiyyuu ni danda'ama."
➓. Maya Angelou - "Ani akkan baradhetti waan ati jettu namoonni ni irraanfatu. Namoonni waan ati hojjette ni dagatu. Garuu, namoonni akkamitti akka isaan gammachiifte hin dagatan."
➊➊. Mike Ditka - "Warra Moo'attoota keessaa kan baatu yoo yaaluu dhiifte."
➊➋. Muhammad Ali - "Guyyaa hin lakkaa'in, guyyaan akka lakkaa'aman godhi!"
Facebook account add ➡️ http://bit.ly/32A48B8
1.6k 0 8 8
2 May, 00:59
Hordoftoota amantaa Islaamaa marti baga ayyaana sooma hiikaa IID ALFIXRIIN isin ga'e jechaa Ayyaanni kun ayyaana milkii, gammachuufi nageenyaa, isiniif haa ta'u.
Ayyaana Gaarii !!
1.6k 0 0 2 3
RIGATA RIGAME: Kitaaba Xinsammuu
📆 Onkololessa, 2020
1.6k 0 9 2 3
23 Apr, 20:15
Faasikaa - Bira Darbuu
➛ Abboomamuu diduu biyya lafaatiin dha'ichi hamaan biyyattiitti dhufe. Dha'ichi hamaan kuni saba warra kan Waaqayyoo irra hin geenye.
Warri saba Waaqayyoo ta'an badiisa hamaa bira darbanii
⁃ Gara guddinaatti darban.
➛ Qooda keenya du'uuf dhalate!
➛️ Jiraachisuuf Du'e!
➛️ Qajeelota taasisuuf du'aa ka’eera!
Fayyini keenya kun tola yoo ta'eeyyu rakasa miti. Dhiigaan bitamne.
➲ Namni maqaa isaatti amanu hundinuu akka jiraatuuf ofii isaa dabarsee nuuf kennuudhaan jaalala du'aa garas jiru nutti argisiise!
"Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame; nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame."
— Isaayaas. 53:5
"Waaqayyo, akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti!"
— Yohannis. 3:16
Hordoftoota amantaa Kiristiyaanaa maraatii baga ayyaana yaadannoo du’aa ka’uu Kiristoosiin Kiristoosiin isin gahe. ✝
Facebook post open ⬇️ https://www.facebook.com/100015382876500/posts/1330747630781320/?app=fbl
⭐ Administrator of @Qaroocompany
6.9k 2 23 5
5.7k 2 3 1
Dubbisuun Hanga Du'aatti!
'Theodoric the Great' namni jedhamu mootiin Roomaa hiriyaa falaasama jaalatu wayii qaba ture. 'Boethius' jedhama.
Mootiin kunis hiriyaa isaa kanaaf aangoo wayii kennuuf illee, hayyootaa fi falaasfota biroo irratti dalagaan isaa yaaddoo tahaa dhufe. Kanaaf, mootiin kuni sababa adda addaa itti funaanee himata irratti banuudhaan nama kana hiisise. ('Har'a namni akkasii hin jiruu?' waan jedhu isiniifan dhiisa)
Himatichis kan du'a itti murteessisiisu tahuu isaa kan beekamu ture. Himata booda dhimma ijoo kan tahe marii ajjeechaa akkamiin akka ajjeefamuuf mari'atamu qofadha. Akkas ta'eeyyuu 'Boethius' hanga marii isaanii xumuranitti kitaaba falaasamaa tokko mana hidhaa keessa taa'ee barreessaa ture.
Mootiin suni kitaabni illee akka galuuf waan heeyyameef dubbisaas ture. Kan isa cinqu akkamiin akka du'uu fi du'a isaa utuu hin taane kitaaba barreessu sana xumuruu dha.
Kitaabichas waggaa tokko keessatti xumure. Kitaaba addaas tahee argame. 'The Consolation of Philosophy' Afaan Laatiniitiin 'De consolatione philosophiae' kan jedhamu.
Kana irraa maal baranna?
• Hacuucamuu dandeessa taha garuu dubbisuu hin dhaabiin,
• Si ajjeesuu yaadu taha garuu barreessuu hin dhaabiin,
• Barreessuu mitii abdii kutannaa keessa darbinee gatantaraa turre ta'a. Garuu jireenyi hin dhaabatu.
• Barreessuu fi dubbisuu hin dhaabinaa!
1.8k 0 6 8
Kitaaba FALMII DHUGAA jedhu kana dubbisaa. Amaanu'eel Oljirraatu isiniif Gumaache.
1.5k 0 5 1 3
Akkaataa santima muraasan Telegram hanga barbaaddan itti fayyadamtan beektuu?
➛ Har'a akkaataa telegramiin akka saantima keessan baay'isee hin fudhannee fi
➛ Akkaataa itti Telegram Heeyyama keessaniin ala file store(Save) hin goone gochuuf Step fayyadamtan isiniif dhiheessa!!! Tokko tokkoon hordofuun itti fayyadamaa!
➛ Hiriyyoota keessaniifis #share
Akkaataa Telegram itti Santima muraasan Fayyadaman:
👉 Mobile Data and
Yoo Mobile Data fayyadamnu
Wantoota armaan gadii gochuu qabna!!
1. Mobile data(Qarshii) akka nuuf qusatuuf setting bilbilaa keessa gallee "restrict background data" irra kaa'achuu qabna.
2. Setting addatti Telegram qabu keessa seenuun sireessuu dha.
Heeyyama keenya malee 'file' kamiyyuu download hin godhu!
App Telegram kamiyyuu
Setting isaa keessatti
👉 When using mobile data
👉 When using wifi
kan jedhu qaba.
✍️ Isin data fayyadamaa yoo jiraattan
When using mobile data kan jedhu tuquudhaan box isiniif fidu hundumaa irraa kaasaa!
Kan jedhu hundumaa cufaa SAVE Godhaa!!!
Kana booda suuraas ta'ee file kamiyyuu yoo isin heeyyamtaniif malee Download hin godhu!!
Facebook add ➡️ https://www.facebook.com/lalifb
1.4k 0 6 3
19 Apr, 13:03
Ilaalcha Misoomee Qaroomina Qaru.pdf
Ilaalcha misoome Qaroomina Qaru
1.5k 0 2 6 7
Kan afaan oromotti hiike:
1.4k 0 5 3 6
onnee dhugaa pdf.pdf
Asoosama: onnee dhugaa
1.7k 0 5 2 4
1.6k 0 1 3 4
Bagaa geessan #GGO
1.8k 0 2 4 8
HAMAAF JETTEE GAARUMMAA KEE HIN GATIN!
🚶‍♂️ Namicha karaa irra deemaa ture tokkotu bofti summaa'aa ta'e tokko otoo abiddaan gubatuu argee abiddicha keessaa baasuuf murteesse. Abidda keessaa baasuuf yeroo ol kaasu bofichi harka isaa hidde. Namichi naasuudhaan boficha ofirraa darbate. Bofichis deebi'ee abiddicha keessatti kufe.
➱ Namichis irra deebi'ee ulee lama fayyadamee abiddicha keessaa isa baase. Kanumaan jireenyi bofichaas ni oole.
➲ Namichi waan namni sun godhaa ture dhaabbatee ilaalaa ture tokko gara nama kanaatti dhiyaatee
"Bofti kun summii isaatiin si hiddee osoo jiruu deebitee isa oolchuuf kan ati yaaltu maaliifi?" Jedhee gaafate.
➲ Namichis "amalli Bofichaa hidduudha; kankoo immoo oolchuudha. Lamaan keenyayyu waan qabnudha kan calaqqisiisne. Amalasaa hamaaf jedhee amala koo isa gaarii jijjiiruun anarra hin jiraatu" jedhee deebiseef.
❏ Walumaagalatti wanta hamaa hamaadhaan deebisuun nurra hin jiraatu faalla isaa hamaa gaarummaadhaan moo'uudha malee.
2.1k 0 11 7
Art. Saamsoon mokonnin
1.9k 0 6 1 1
EEBBISAA BAAYISAA ABEETUU(Koottaa Kolfaa)
1.8k 0 3 2
Barreessaan- Guutaa Rabbiirraa
Bara - Caamsaa 2013
2k 0 10 2 7
■ "Hiyyeessa taatee yoo dhalatte balleessaa kee miti, hiyyeessa taatee yoo duute garuu balleessaa keeti."
— (Biilii Giraam)
■ "Maatii irraa dhalatte filachuu hin dandeessu ijoollee sirraa dhalataniif garuu haala mijeessuu ni dandeessa."
■ "Namoonni waan tokko hojjechuuf yaalanii kufan, warra homaa utuu hin hojjetin milkaa'an irra ni caalu."
— (Looyid Joonsi)
■ "Muka ija qabutti dhagaan baay'ata."
■ "Karaa si baasu hin beektu taanaan deemsa hin eegalin."
■ "Nama hundumaaf gaarummaa yaadi, garuu hiriyyaa filadhu."
■ "Rabbi gurra lamaa fi afaan tokko nuuf kennuun isaa baayyee dhaggeeffachuu fi xiqqoo dubbachuu akka qabnu nu hubachiisuu dhaafi."
■ "Beekumsi nyaata lubbuuti."
■ "Amala nama tokkoo yoo baruu feete aangoo yookiin taayitaa kenniif."
— (Abrahaam Liinkan)
1.9k 0 12 5
Faasikaa - Bira Darbuu ➛ Abboomamuu diduu biyya lafaatiin dha'ichi hamaan biyyattiitti dhufe. Dh...
Post #186: Photo
Dubbisuun Hanga Du'aatti! ━━━━━❅☕️❅━━━━━ 'Theodoric the Great' namni jedhamu mootiin Roomaa hiri...
Asoosama: onnee dhugaa #share gochuu hin dagatinaa Galatoomaa ❤ Facebook add ➡️ https://www.f...
RIGATA RIGAME: Kitaaba Xinsammuu Barreessa:Gammachiis Abdallaa 📆 Onkololessa, 2020 #share goc...